Jaantuska Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka Ugu Dambeeya | Martech Zone
Cheatheet-ka Suuqgeynta Suuqgeynta Emailka Ultimate
Isniin, Oktoobar 21, 2013 Isniin, Oktoobar 21, 2013 Kelsey Cox
Waxaa jira xeelado badan iyo caadooyin aad kala dooran karto markaad ka fekerayso habka aad wax u wajahayso email iyo suuqgeynta waxyaabaha. Qaar badan oo ka mid ah suuqgeynta emaylka ugu sarreeya waxay jimicsadaan xeelado kala duwan sida istiraatiijiyadda, waqtiga, imtixaanka, iyo guud ahaan qaabeynta naqshadeynta, laakiin xeeladdee ayaa keenta natiijooyinka ugu fiican? Keebaa ah inaad diirada saarto mid kale?
Iyada oo celcelis ahaan jilayaashu waqtigooda badankood ku lumiyaan horumarinta hal abuurnimada (23%) oo ka soo horjeedda kuwa waxqabadka sarreeya waxay u hurayaan in badan oo ka mid ah waqtigooda guud istiraatiijiyad (22%), way iska caddahay in gaarsiintu ay macno u yeelan karto sida ugu badan - haddii aysan ka badnayn - waxyaabaha aad ' bixinta.
Tixgeli, tusaale ahaan, in 72% dhammaan suuqleyda ay tijaabiyaan khadadka maaddada emaylkooda ka hor inta aanad u dirin liisaska qaybinta, halka kaliya 15% ay tijaabiyaan emaylka 'qaabka moobiilka iyo muuqaalka muuqaalka. Marka la eego xaqiiqda ah in 75% milkiilayaasha taleefannada casriga ahi ay “aad ugu dhowdahay” inay tirtiraan emayllada aan si fudud ugu akhriyi karin taleefannadooda, ku guuldareysiga inay ka fiirsadaan faa iidada ay leedahay moobiilku waxay sababi kartaa khasaaro baaxad leh oo ka dhex socda olole shaqsiyeed, iyada oo aan la xusin guud ahaan istiraatiijiyad sumadeed.
Tani waa mid ka mid ah dhinacyo badan oo la tixgelinayo markii la raadinayo hagaajinta waxqabadka suuqgeynta emailkaaga. Nasiib wanaag, Suuqa ayaa meel dhigay waxtar lehemayl warqad ah”Si aan ugu tixraacno rajada hagaajinta iyo hagaajinta istaraatiijiyada emaylka:
Tags: Email MarketingMacluumaadka Suuqgeynta
VevoCart: Isbadal Weyn Oo Isboorti ASP.NET
Suuqgeynta moobiilka ee Warshadaha Tafaariiqda